အား…ခေါငျးကိုကျလာပွီ ဘာလုပျရမလဲ – My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
ကမ်ဘာပျေါက လူတိုငျး သခြောပေါကျ ဖွဈဖူးမဲ့ ဝဒေနာတဈခုက ဘာလဲလို့မေးရငျ ကြိနျးသပေေါကျ အမှတျပွညျ့ရမဲ့ အဖွကေ “ခေါငျးကိုကျတာ” လို့ပဲဆိုရမယျ။
လူမှနျရငျ ခေါငျးကိုကျဖူးရမယျ။ တခြို့ကတော့ တခါတလမှေ ရှားရှားပါးပါးကိုကျတတျကွပမေဲ့ တခြို့ကတော့ ခေါငျးဆိုတာ ‘ကိုကျ’ဖို့အတှကျသကျသကျပဲ ပုခုံးနှဈဖကျကွား လာပေါကျနသေလိုမြိုး တဈယောကျတညျး ကနျထရိုကျဆှဲ ကိုကျနကွေရရှာတယျ။ ဘယျသူမှခေါငျးမကိုကျခငျြသလို ကိုကျလာရငျလညျး မွနျမွနျပွနျပြောကျခငျြကွတာပါပဲ။ တခြို့ကတြော့လညျး ‘ငါခေါငျးကိုကျနတော သှေးရိုးသားရိုးမှ ဟုတျရဲ့လား..ခေါငျးထဲမှာ အကွိတျမြားဖွဈနလေား’ စိုးရိမျကွသလို တခြို့ကလြညျး ‘ခေါငျးထဲ ငါ့ခရပျရျှ ကလေးမြား ဝငျနလေို့ အခြိနျပွညျ့ကိုကျနတောလား’ ဘာညာ ကဗြာဆနျဆနျတှေးကွတာပေါ့။
?ဘာတှကွေောငျ့ ခေါငျးကိုကျတတျလဲ ??
စိတျဖိစီးမှုကွောငျ့ ကိုကျတဲ့ခေါငျးပါ။ ခေါငျးကိုကျဝဒေနာအားလုံးရဲ့ ၉၀%လောကျက ဒါကွောငျ့ပါ။ အမြိုးသမီးတှမှော ပိုဖွဈပါတယျ။ ခေါငျးပတျပတျလညျမှာ ကွိုးနဲ့တငျးကပျြနအေောငျ စညျးခံထားရသလို ဆှဲညှဈခံထားရသလို ကိုကျနတေတျပါတယျ။ ဇကျကွောတှပေါ နာနတေတျတယျ။ ခေါငျးကိုကျပြောကျဆေးတှအေပွငျ စိတျဖိစီးမှု လြှော့ခဖြို့ပါ လိုပါမယျ။
ခေါငျးတဈခွမျးကိုကျရောဂါပါ။ အမြိုးသမီးတှမှောပဲ ပိုဖွဈတတျပါတယျ။ ဓမ်မတာမပျေါခငျမှာ ပိုကိုကျတတျပွီး နပေူမိသှားရငျလညျး ကိုကျလာတတျပါတယျ။ ရကျအတျောကွာကွာ ကိုကျတတျပွီး အလုပျပကျြ အကိုငျပကျြနဲ့ သိပျဆိုးတဲ့ ရောဂါပါ။ ခေါငျးတဈခွမျးကပဲ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးကိုကျမယျ..
အလငျးစူးစူးမကွညျ့နိုငျတာမြိုးတှအေထိ ဖွဈပါတယျ။ အိပျလိုကျမှ သကျသာသှားတတျပွီး ဆရာဝနျပွဖို့လိုပါတယျ။
ရုတျတရကျ မကျြလုံးတဈဖကျက စကိုကျလာပွီး မကျြရညျတှကြေ.. နှာရညျတှကြေ.. မကျြခှံတှပေါရောငျလာပွီး စူးစူးရှရှကိုကျတတျတယျ။ ညဘကျပိုဖွဈတတျတယျ။ တဈနကေို့ တဈကွိမျကနေ ရှဈကွိမျလောကျအထိ.. တဈခါကိုကျရငျ ၁၅မိနဈကနေ နှဈနာရီခှဲလောကျအထိ ကိုကျလိုကျ လုံးဝပွနျပြောကျသှားလိုကျ ဖွဈနတေတျတယျ။ ၄ ပါတျကနေ ၁၂ ပါတျလောကျအထိဆကျတိုကျ ကိုကျနတေတျပွီး လတျောတျောကွာကွာကနေ နှဈပိုငျးအထိကို ပွနျပြောကျသှားတတျတယျ။
ဒါကတော့ ယောကျြားလေးတှမှော ပိုဖွဈတတျပွီး ဆေးလိပျသောကျရငျ ပိုဖွဈပါတယျ။
ဒါကတော့ ခေါငျးကိုကျလို့ အဆဈအမွဈတှကေိုကျလို့ အကိုကျအခဲပြောကျဆေးတှေ အသောကျမြားရာကနေ ဆေးကွောငျ့ ပွနျခေါငျးကိုကျနရေတဲ့ ပွဿနာပါ။
အကိုကျအခဲပြောကျဆေးကို ပဲလှျောလို ပါးစပျထဲ အလှယျပဈထညျ့တတျကွသူတှမှော ခေါငျးကိုကျတော့ဆေးသောကျ..ဆေးသောကျတော့ခေါငျးကိုကျနဲ့ သံသရာလညျနတေတျပါတယျ။ ဆေးတှေ ပွနျဖွတျလိုကျမှ ကောငျးသှားတတျပါတယျ။
?တခွားခေါငျးကိုကျနိုငျတဲ့ အခွအေနတှေေ ကရော ??
– အရကျသောကျပွီး နောကျနမေ့နကျမှာ hangover ဖွဈပွီး ကိုကျနတေတျတယျ
– Carbon Monoxide အဆိပျသငျ့ရငျ
– ရုတျတရကျ ရခေဲမုနျ့လိုမြိုး အရမျးအေးတာ တဈခုခုစားမိရငျ
– Magnesium ဓာတျနဲ့ Vitamin B အုပျစုခြို့တဲ့လာရငျ
– ညဘကျအိပျရငျး သှားကွိတျတတျရငျ
ဒီလိုအခွအေနတှေအေပွငျ တခါတလလေညျး ဘာကွောငျ့ကိုကျမှနျးမသိ ကိုကျနတေတျပါတယျ။
?ခေါငျးကိုကျရငျ ဘာလုပျရမလဲ ??
– Paracetamol လိုခေါငျးကိုကျပြောကျဆေး တဈခုခုသောကျပါ
– ရနှေေးအိတျ ဒါမှမဟုတျ ရခေဲအိတျ ကပျကွညျ့ပါ
– အေးအေးခမျြးခမျြး အနားယူလိုကျပါ
– အိပျရေးဝအောငျ အိပျပါ
– ရနှေေးနှေးလေးနဲ့ ရခြေိုးပါ
– ကျောဖီပူပူလေးတဈခှကျလောကျ သောကျပါ
– အစာ အခြိနျမှနျစားပါ..အခြိုဓာတျကို တကျလိုကျ ကလြိုကျမဖွဈအောငျထိနျးပါ
– အငံနဲ့ အဆီအစိမျ့လြှော့ပါ
– သှေးပေါငျ ထိနျးပါ
– အားကစားတဈခုခု ပုံမှနျလုပျပါ
?ဘယျလိုအခွအေနဆေို သတိထားရမလဲ ??
– သိပျဆိုးဆိုးဝါးဝါး မခံနိုငျလောကျအောငျ ပထမဆုံးအကွိမျ ကိုကျမယျ
– အရငျကိုကျဖူးတာထကျ ပိုကိုကျလာမယျ
– မနကျအိပျရာထခြိနျ ပိုကိုကျနမေယျ..ရှငေုံ့လိုကျတိုငျးပိုကိုကျလာမယျ
– ဆကျတိုကျမပြောကျနိုငျဘဲ ကိုကျနပွေီး ဦးရပွေားတှပေါ နာလာမယျ
– မကျြလုံးတှပေါ ကိုကျမယျ အမွငျအာရုံဝါးသှားမယျ
– နောကျစမှေ့ာ ရုတျတရကျ ပွငျးပွငျးထနျထနျဆိုးဆိုးဝါးဝါး အရှိနျပွငျးပွငျးနဲ့ ထိုးကိုကျမယျ
ဒီလို ထူးထူးခွားခွား လက်ခဏာတှပေါ ဖွဈလာရငျတော့ ဆရာဝနျနဲ့ အမွနျဆုံးတှဖေို့လိုပါလိမျ့မယျ။
ကမ္ဘာပေါ်က လူတိုင်း သေချာပေါက် ဖြစ်ဖူးမဲ့ ဝေဒနာတစ်ခုက ဘာလဲလို့မေးရင် ကျိန်းသေပေါက် အမှတ်ပြည့်ရမဲ့ အဖြေက “ခေါင်းကိုက်တာ” လို့ပဲဆိုရမယ်။
လူမှန်ရင် ခေါင်းကိုက်ဖူးရမယ်။ တချို့ကတော့ တခါတလေမှ ရှားရှားပါးပါးကိုက်တတ်ကြပေမဲ့ တချို့ကတော့ ခေါင်းဆိုတာ ‘ကိုက်’ဖို့အတွက်သက်သက်ပဲ ပုခုံးနှစ်ဖက်ကြား လာပေါက်နေသလိုမျိုး တစ်ယောက်တည်း ကန်ထရိုက်ဆွဲ ကိုက်နေကြရရှာတယ်။ ဘယ်သူမှခေါင်းမကိုက်ချင်သလို ကိုက်လာရင်လည်း မြန်မြန်ပြန်ပျောက်ချင်ကြတာပါပဲ။ တချို့ကျတော့လည်း ‘ငါခေါင်းကိုက်နေတာ သွေးရိုးသားရိုးမှ ဟုတ်ရဲ့လား..ခေါင်းထဲမှာ အကြိတ်များဖြစ်နေလား’ စိုးရိမ်ကြသလို တချို့ကျလည်း ‘ခေါင်းထဲ ငါ့ခရပ်ရှ် ကလေးများ ဝင်နေလို့ အချိန်ပြည့်ကိုက်နေတာလား’ ဘာညာ ကဗျာဆန်ဆန်တွေးကြတာပေါ့။
?ဘာတွေကြောင့် ခေါင်းကိုက်တတ်လဲ ??
စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့် ကိုက်တဲ့ခေါင်းပါ။ ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာအားလုံးရဲ့ ၉၀%လောက်က ဒါကြောင့်ပါ။ အမျိုးသမီးတွေမှာ ပိုဖြစ်ပါတယ်။ ခေါင်းပတ်ပတ်လည်မှာ ကြိုးနဲ့တင်းကျပ်နေအောင် စည်းခံထားရသလို ဆွဲညှစ်ခံထားရသလို ကိုက်နေတတ်ပါတယ်။ ဇက်ကြောတွေပါ နာနေတတ်တယ်။ ခေါင်းကိုက်ပျောက်ဆေးတွေအပြင် စိတ်ဖိစီးမှု လျှော့ချဖို့ပါ လိုပါမယ်။
ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ရောဂါပါ။ အမျိုးသမီးတွေမှာပဲ ပိုဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဓမ္မတာမပေါ်ခင်မှာ ပိုကိုက်တတ်ပြီး နေပူမိသွားရင်လည်း ကိုက်လာတတ်ပါတယ်။ ရက်အတော်ကြာကြာ ကိုက်တတ်ပြီး အလုပ်ပျက် အကိုင်ပျက်နဲ့ သိပ်ဆိုးတဲ့ ရောဂါပါ။ ခေါင်းတစ်ခြမ်းကပဲ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးကိုက်မယ်..
အလင်းစူးစူးမကြည့်နိုင်တာမျိုးတွေအထိ ဖြစ်ပါတယ်။ အိပ်လိုက်မှ သက်သာသွားတတ်ပြီး ဆရာဝန်ပြဖို့လိုပါတယ်။
ရုတ်တရက် မျက်လုံးတစ်ဖက်က စကိုက်လာပြီး မျက်ရည်တွေကျ.. နှာရည်တွေကျ.. မျက်ခွံတွေပါရောင်လာပြီး စူးစူးရှရှကိုက်တတ်တယ်။ ညဘက်ပိုဖြစ်တတ်တယ်။ တစ်နေ့ကို တစ်ကြိမ်ကနေ ရှစ်ကြိမ်လောက်အထိ.. တစ်ခါကိုက်ရင် ၁၅မိနစ်ကနေ နှစ်နာရီခွဲလောက်အထိ ကိုက်လိုက် လုံးဝပြန်ပျောက်သွားလိုက် ဖြစ်နေတတ်တယ်။ ၄ ပါတ်ကနေ ၁၂ ပါတ်လောက်အထိဆက်တိုက် ကိုက်နေတတ်ပြီး လတော်တော်ကြာကြာကနေ နှစ်ပိုင်းအထိကို ပြန်ပျောက်သွားတတ်တယ်။
ဒါကတော့ ယောက်ျားလေးတွေမှာ ပိုဖြစ်တတ်ပြီး ဆေးလိပ်သောက်ရင် ပိုဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကတော့ ခေါင်းကိုက်လို့ အဆစ်အမြစ်တွေကိုက်လို့ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးတွေ အသောက်များရာကနေ ဆေးကြောင့် ပြန်ခေါင်းကိုက်နေရတဲ့ ပြဿနာပါ။
အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးကို ပဲလှော်လို ပါးစပ်ထဲ အလွယ်ပစ်ထည့်တတ်ကြသူတွေမှာ ခေါင်းကိုက်တော့ဆေးသောက်..ဆေးသောက်တော့ခေါင်းကိုက်နဲ့ သံသရာလည်နေတတ်ပါတယ်။ ဆေးတွေ ပြန်ဖြတ်လိုက်မှ ကောင်းသွားတတ်ပါတယ်။
?တခြားခေါင်းကိုက်နိုင်တဲ့ အခြေအနေတွေ ကရော ??
– အရက်သောက်ပြီး နောက်နေ့မနက်မှာ hangover ဖြစ်ပြီး ကိုက်နေတတ်တယ်
– Carbon Monoxide အဆိပ်သင့်ရင်
– ရုတ်တရက် ရေခဲမုန့်လိုမျိုး အရမ်းအေးတာ တစ်ခုခုစားမိရင်
– Magnesium ဓာတ်နဲ့ Vitamin B အုပ်စုချို့တဲ့လာရင်
– ညဘက်အိပ်ရင်း သွားကြိတ်တတ်ရင်
ဒီလိုအခြေအနေတွေအပြင် တခါတလေလည်း ဘာကြောင့်ကိုက်မှန်းမသိ ကိုက်နေတတ်ပါတယ်။
?ခေါင်းကိုက်ရင် ဘာလုပ်ရမလဲ ??
– Paracetamol လိုခေါင်းကိုက်ပျောက်ဆေး တစ်ခုခုသောက်ပါ
– ရေနွေးအိတ် ဒါမှမဟုတ် ရေခဲအိတ် ကပ်ကြည့်ပါ
– အေးအေးချမ်းချမ်း အနားယူလိုက်ပါ
– အိပ်ရေးဝအောင် အိပ်ပါ
– ရေနွေးနွေးလေးနဲ့ ရေချိုးပါ
– ကော်ဖီပူပူလေးတစ်ခွက်လောက် သောက်ပါ
– အစာ အချိန်မှန်စားပါ..အချိုဓာတ်ကို တက်လိုက် ကျလိုက်မဖြစ်အောင်ထိန်းပါ
– အငံနဲ့ အဆီအစိမ့်လျှော့ပါ
– သွေးပေါင် ထိန်းပါ
– အားကစားတစ်ခုခု ပုံမှန်လုပ်ပါ
?ဘယ်လိုအခြေအနေဆို သတိထားရမလဲ ??
– သိပ်ဆိုးဆိုးဝါးဝါး မခံနိုင်လောက်အောင် ပထမဆုံးအကြိမ် ကိုက်မယ်
– အရင်ကိုက်ဖူးတာထက် ပိုကိုက်လာမယ်
– မနက်အိပ်ရာထချိန် ပိုကိုက်နေမယ်..ရှေ့ငုံ့လိုက်တိုင်းပိုကိုက်လာမယ်
– ဆက်တိုက်မပျောက်နိုင်ဘဲ ကိုက်နေပြီး ဦးရေပြားတွေပါ နာလာမယ်
– မျက်လုံးတွေပါ ကိုက်မယ် အမြင်အာရုံဝါးသွားမယ်
– နောက်စေ့မှာ ရုတ်တရက် ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆိုးဆိုးဝါးဝါး အရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ ထိုးကိုက်မယ်
ဒီလို ထူးထူးခြားခြား လက္ခဏာတွေပါ ဖြစ်လာရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့ အမြန်ဆုံးတွေ့ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။